Akubuzwa, akukho isikhathi esanele kusihlwa ngemva komsebenzi. Ngingathanda ukuba babhekane ngokushesha ngemisebenzi yasendlini ukuba nginakekele lomndeni. Futhi, udinga ukudla okusheshayo dinner is awumanga - izazi belulekwa ukudla kungakapheli 18 amahora.
Kanjani ukuba sibhekane nale umsebenzi - ukulungiselela dinner esiphundu futhi ngokushesha?
Zama ukuthi reheat ukudla olungiselelwe, wathenga esitolo, upheke okuthile okusha. Ngakho wena unakekele impilo yomndeni. Neze nokudla okumandi kakhulu kusihlwa kungenziwa ngokuthi i isaladi yemifino ne ephansi fat inyama, inhlanzi noma inyama yenkukhu.
Ukuze silungiselele dinner esheshayo, udinga ukuthi ucabange kusengaphambili ngakho.
Recipe Inkukhu Mexican
inhlanganisela Traditional Mexican imikhiqizo - utamatisi, corn kanye upelepele - ephelele inkukhu inyama.
Udinga ukuba kule mikhiqizo: 600 g inkukhu (mhlawumbe ithanga), 3 clove nesweli, isipuni coriander omisiwe, isigamu ikhilo utamatisi elibomvu, anyanisi, isigamu isipuni upelepele obomvu, isipuni sikasawoti kanye 125 g zommbila eqandisiwe (ungasebenzisa okusemathinini) .
Inkukhu kwamathanga gazinga emafutheni zemifino nxazonke kuze brown.
Phakathi naleso sikhathi, fake usike garlic kanye no-anyanisi.
Susa inyama kusukela pan futhi wasibeka brown nesweli kanye no-anyanisi kuze kuthambe.
Phakathi naleso sikhathi, ukuhlanza isikhumba ne utamatisi kanye bawasika abe cubes.
Ngo epanini ukuthosa anyanisi ukubeka Chili kanye coriander. Utamatisi sikadali ne juice.
Buyela inyama yenkukhu kuso bese ukuphela imizuzu engaba ngu-20.
Engeza amabele bese ukuphela imizuzu 5.
kwakusihlwa Quick ngomumo. Khonza nelayisi noma imifino.
Enye indlela yokuzivikela ngokushesha ukupheka ukudla kwakusihlwa - ikhaya pilaf
Leresiphi kumane jikelele. Silungiswa imizuzu.
Uzodinga izitsha thick-ngabafaka noma ezijulile ukuthosa epanini.
Setha imikhiqizo: inyama yenkukhu (noma iyiphi ingxenye) noma yenkomo sikadali mayelana 0.5 kg, onion, isanqante esisodwa esikhulu; irayisi inkomishi (cishe 200 g) no-2 izinkomishi zamanzi, amafutha yemifino (3 wezipuni). Izinongo - Curry, izikebhe pilaf noma yini oyithandayo, qiniseka le red pepper amnandi (mayelana isipuni), usawoti kanye ikhanda garlic.
Beka i-pan on isitofu uthele amafutha phansi.
Sika anyanisi bese wasibeka ensundu.
Ikhasi futhi nquma ku cubes ezinkulu futhi izaqathe kanye gazinga anyanisi. Ungakhohlwa ugovuze.
Izinongo uthele isanqante futhi ukuxubana.
Geza inyama bese efakwa yokosela. Jikela ukubonisa uqweqwe.
Ngemuva kwemizuzu engu-5, uthele pan irayisi ezomile.
Thela amanzi (abandayo can) e ingxenye esiqinile izingxenye 2 amanzi ukuze 1 ingxenye irayisi ezomile. Musa mix!
Letha ngamathumba esindayo, engeza usawoti, ikhava bese ukunciphisa ukushisa. Pilaf usulungile emva kwemizuzu 12.
Phakathi naleso sikhathi, ikhasi le-garlic kanye no imizuzu emi-5 ngaphambi kokuphela ukupheka isikhathi wakufaka irayisi. Musa ugovuze.
Ekupheleni ukupheka isikhathi, ukuvala umlilo bese ulinda imizuzu 5.
Hlanganisa futhi bakhonze hot.
Leresiphi ingenye sici - ubuchwepheshe obufanayo kungenziwa kuphekwe dinner esheshayo kunoma iyiphi enye groats (nokunye okufana nokolweni, ukolweni, ummbila), kodwa ukuthatha isilinganiso okusanhlamvu namanzi 1: 3.
Pie a la "idina Quick"
pie Kuyamangalisa okumnandi futhi eqotho, okuyinto ungakwazi abeke yisiphi ukugxusha.
It sifana Casserole.
Ukuze ukuhlole isidingo: polstakana yogurt, 100 g imayonnaise (okunama-kilojoule amancane), 4 wezipuni ufulawa, amaqanda 2, isigamu isipuni baking soda, ingcosana kasawoti. Zonke ndawonye, whisking kuze mass homogeneous Fluffy.
Ukugcwalisa: amazambane abilisiwe (3 izingcezu) oqoshiwe, abilisiwe inkukhu inyama comminuted (200-300 g), okuthosiwe amakhowe futhi anyanisi (200). Zonke izingxenye ifakwa kwi ngezansi efomini nosawoti.
Thela ngokugcwalisa hlolo ukuhlobisa izinhlobo eziningana utamatisi "Cherry" ubhake imizuzu engaba ngu-40 kuhhavini.
Lokhu ikhekhe kuzokusiza ukupheka dinner esheshayo kakhulu, futhi uba yingxenye ekhaya ukupheka yakho isidlo.
Indlela ukupheka Azu yenkomo nge ukhukhamba
Ushizi appetizer - esihlwabusayo hhayi eqolo!
Ngabhema ingulube: zokupheka ngezithombe
Abathengi bezinketho kanambambili eRussia: ukulinganisa, ukubuyekezwa, ukubuyekezwa
Hitman sniper inselele: ukuhlolwa odlulayo
Ubuhlungu esiswini ngaphezu inkaba: izimbangela, ukwelashwa. Kuthiwani uma ubuhlungu ngaphezu inkaba?
Indlela ukuhlomisa ekamelweni elincane? Izindlela ukulungisa ekamelweni elincane
Ingaphakathi ngesitayela sesiJalimane: izici
Umuthi 'Clindamycin ": analogue, imiyalelo, amanani
Double Breath izinyoni ikakhulukazi negesi lokushintshisana
Izivivinyo ngaphandle kwezinkinga, noma lapho ukufihla Spurs?